प्राइम लाईफको १६० % हकप्रद निष्कासनका लागि कहिले हुँदैछ बूक क्लोज ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » प्राइम लाईफको १६० % हकप्रद निष्कासनका लागि कहिले हुँदैछ बूक क्लोज ?
काठमाडौं - प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सले १६०% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि फागुन १७ गतेदेखि बूक क्लोज गर्ने भएको छ । यसर्थ कम्पनीको १६०% हकप्रद प्राप्त गर्नका लागि फागुन १६ गतेसम्म शेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ २८ गते कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनका लागिvअनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।
इन्स्योरेन्सले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ९७ करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको ६० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको हकप्रद शेयरलाई इक्रा नेपालले ग्रेड ४ प्लस प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको आधारहरु औसतभन्दा तल रहेको जनाउछ । कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्वार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।